Hadal haynta baraha bulshada, kadib doorashadii Puntland - BBC News Somali
Hadal haynta baraha bulshada, kadib doorashadii Puntland
9 Jannaayo 2019
Image caption Dadka ayaa aragtiyadooda ku soo bandhigaya baraha bulshada
Dadka baraha bulshada isticmaala qaarkood ayaa aad u hadal haya doorashadii madaxweyne ee shalay ka dhacday Puntland taasoo uu ku guuleystay Siciid Cabdullahi Deni.
Waxay badanood ka hadlayaan, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) oo ku haray wareega koowaad, halka qaarkoodna u sababeeynayaan dagaalka siyaasadeed ee uu kula jiray dowladda federaalka ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Cabdiweli Gaas ayaa lagu xasuusan doonaa kaalintii uu kulahaa iskaashigii maamul goboleedyada ee ay wada dhiseen isaga iyo madaxda maamullada kale ee dalka oo hada qaarkood ay meesha ka baxeen.
Haweenka iyo doorashada Puntland
Cabdiweli Gaas muxuu eersaday?
Dadka aragtiyadooda ku soo bandhigay baraha xiriirka bulshada qaarkood waxay leeyihin "maadaama uu Cabdiweli Gaas baxay waxaa ku xiga Madaxweynaha maamul goboleedka Jubalaand Axmed Maxamed Islaam", inkastoo dadka ra'yigooda uu kala duwan yahay.
Dhaka kale, waxaa aad baraha bulshada ay dadka ugu doodayaan sida uu noqon doono xiirirka madaxweynaha cusub iyo madaxda dowladda fedaraalka.
Ka dib markii wafdi ballaaran oo dowladda federaalka ka socday ay shalay gaareen magaalada Garoowe oo ay la kulmeen Madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni, waxaa la is weydiinayaa waxa iska baddali kara xiriirka labada dhinac.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo hoggaaminayay wafdiga ballaaran ee Garoowe tegay ayaa sheegay in halkaas ay u tageen in Madaxweynaha cusub ee Puntland ay u gudbiyaan salaan ay ka sideen madaxda sare ee dowladda dhexe.
Madaxweynaha cusub, Siciid Cabdullahi Deni ayaa la doortay ka dib markii ay ilaa wareeggii saddexaad ee doorashada isla gaareen Janaraal Aasad oo ahaa musharraxii loollanka adag galinayay
Puntland ayaa horay xubin muhiim ah uga ahayd golaha iskaashiga maamul goboleedyada Soomaaliya, oo khilaaf weyn uu kala dhexeeyo dowladda dhexe ee federaalka.